Tag: varotra fifantohana manga | Martech Zone
Tag: varotra fifantohana manga
Tamin'ny Alatsinainy dia nizara ny sary avy amin'ny Blue Focus Marketing, ny Brand anao ho planeta izahay, manome porofo ary fampitahana tsotra izay miresaka ny herin'ny fampiasana ireo mpiasanao hanampy amin'ny fampiroboroboana ny dian-tsosialy. Mihoatra ny fanakoako ny marikao izany, araka ny hitanao ao amin'ny sary vaovao. Raha manazava ao amin'ny bokinay be mpividy indrindra any Amazon izahay, The Social Empleane: Ny Orinasa Lehibe Manao Asa Media Sosialy, tsy misy diso izany
Faly be izahay rehefa nahita ny EverySocial sy ny fahaizana mampiasa ny mpiasanao manokana hanampy amin'ny fampitomboana ny feon'ny orinasanao saingy mbola gaga ihany izahay amin'ny fahanginan'ny orinasa maro. Fantatsika fa misy mpiasa tsy mifandray tsotra izao, fa rehefa mahita retweet mpivady avy amin'ny orinasa misy mpiasa an-jatony izahay dia manomboka manontany tena hoe inona no mety tsy mety. Ao amin'ny mpiasa sosialy: manao ahoana ny orinasa lehibe manao media sosialy